Top 6 sữa dê cho bé tốt được các mẹ tin dùng nhất hiện nay | Vbid.vn - Vbid.vn
Bạn đang đọc: Top 6 sữa dê cho bé tốt được các mẹ tin dùng nhất hiện nay | Vbid.vn in vbid.vn
Dị ka anyị niile maara, maka mmepe zuru oke nke ụmụaka, ịṅụ mmiri ara ehi bụ ihe mbụ na-ebute ụzọ nke ndị nne na-ahọrọkarị. Otú ọ dị, ihe nfụkasị ahụ nke mmiri ara ehi nke mmiri ara ehi na-adịkarị n’ime ụmụaka, na-eme ka ha gbapụta, afọ ntachi, na-enwe mmegharị afọ na ibu ibu ngwa ngwa. Ya mere, ọtụtụ ndị nne na-atụgharị ugbu a na mmiri ara ewu n’ihi ịdị elu nke ngwaahịa ahụ. Isiokwu na-esonụ ga-achịkọta top 6 ewu mmiri ara ehi kacha mma ugbu a maka ntụaka gị.
1 Gịnị bụ mmiri ara ewu?
2 Mmiri ara ewu ọ dị mma ịṅụ?
3 Mmiri ara ewu 6 kacha mma maka ụmụ amụrụ ọhụrụ taa
3.1 3.1 Mmiri ara ehi ewu nke Korea
3.2 3.2 Mmiri ara ehi ewu ewu 0+ (ụmụaka 0-12 ọnwa)
3.3 3.3 Kabrita Goat Milk No. 1 maka ụmụ ọhụrụ sitere na ọnwa 0-6
3.4 3.4 Goatmil Ewu Mmiri ara ehi BA – Ewu mmiri ara ehi
3.5 3.5 Ildong No. 1 mmiri ara ewu na Korea – mmiri ara ewu maka ụmụ ọhụrụ
3.6 3.6 Mmiri ara ewu maka ụmụ ọhụrụ DG 1
Gịnị bụ mmiri ara ewu?
N’ezie, mmiri ara ewu bụ mmiri ara ehi a na-esi n’ewu na-amịpụta, nke bụ ewu ewu. Enwere ike ịhụ na nke a bụ isi nri dị mkpa, na-edozi ahụ. Ya mere, a na-atụ aro mmiri ara ewu ka ọ bụrụ nri bara uru maka ụmụaka.
Tụkwasị na nke ahụ, mmiri ara ehi ewu bụkwa nri dị mma, nke a tụkwasịrị obi ruo ọtụtụ narị afọ. Ọzọkwa, ewu na-emepụta mmiri ara ehi pụrụ iche, dị mma nke nwere ọtụtụ uru maka ahụ na gburugburu ebe obibi. Mgbe ị na-aṅụ mmanya, ị ga-enwe mmetụta na-anọpụ iche, dị ka ekpomeekpo aku na ụdị ude dị ọkụ.
Mmiri ara ewu ọ dị mma ịṅụ?
Ghọta na mmiri ara ehi ewu bụ ezigbo nhọrọ maka ụmụaka na-enwe nfụkasị na protein na lactose dị na mmiri ara ehi. Ihe kpatara ya bụ na mmiri ara ewu enweghị protein dị mgbagwoju anya dị na mmiri ara ehi ma nwee obere lactose. N’ihi ya, ọ bụ obere allergenic. N’otu oge ahụ, mmiri ara ehi ewu ọ bụghị nanị na ọ dị mma maka ụmụ ọhụrụ nkịtị kamakwa ọ bụkwa ngwọta kachasị mma maka ụmụ ọhụrụ nwere ihe nfụkasị na mmiri ara ehi.
A ghaghị ịkọ uru nke mmiri ara ehi ewu na ọ na-atọ ụtọ, dị jụụ na ọgaranya na omega 6. Ya mere, mmiri ara ehi ewu nwere mmetụta nke na-akpali ụbụrụ ụbụrụ ụmụaka. Na mgbakwunye, mmiri ara ehi ewu dị obere na abụba ma dịkwa mfe ịkụrisị karịa mmiri ara ehi. Ya mere, ọ ga-emepụta ọnọdụ maka ahụ na-agbari ngwa ngwa ma banye.
Ọbụghị naanị nke ahụ, mmiri ara ehi ewu nwekwara ihe mgbochi ebumpụta ụwa n’ihi ihe ndị dị ka caprylic acid, yabụ na ọ nwere ikike ime ka usoro nri digestive kwụsị ma melite nsogbu eriri afọ.
Ọzọkwa, mmiri ara ehi ewu nwere protein, vitamin A, calcium, magnesium na vitamin A na B. Ihe ndị a na-enyere ụmụaka aka ịbawanye elu na ịzụlite ọkpụkpụ na ibu ngwa ngwa. Karịsịa, mmiri ara ehi ewu nwekwara ike ịbawanye ígwè na ọla kọpa metabolism, karịsịa na ndị ọ na-esiri ike ịnweta na mgbari ihe ndị a.
Otu ihe na-adọrọ mmasị bụ na ihe oriri na-edozi ahụ na mmiri ara ehi na-abanye ngwa ngwa site na ụmụaka, na-eduga n’agụụ na iri nri nke ukwuu. N’otu oge ahụ, melite ibu, ogologo, gbochie ụkọ ígwè anaemia. Site n’ebe ahụ, ọ na-enyere aka mee ka ọkpụkpụ ọkpụkpụ dị ngwa ngwa, ọkpụkpụ mineralization na ịbawanye njupụta ọkpụkpụ. Nke a na-enyere aka mee ka ọkpụkpụ sie ike maka ụmụaka ijide ma too.
Ya mere, iji mmiri ara ehi ewu na-enyere ụmụaka aka imeziwanye ibu ibu, na-abawanye nguzogide, na ịkwalite mmepụta ọkpụkpụ. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ọ na-abawanye ọkwa nke vitamin, mineral na hemoglobin n’ime ọbara.
Agbanyeghị, akụkụ dị ala nke mmiri ara ewu bụ na ọ daa ogbenye na nri karịa mmiri ara ara ma ọ bụ usoro mmiri ara ehi dabere. Ọzọkwa, ọdịnaya vitamin D dị na mmiri ara ewu dị ntakịrị, obere ígwè, vitamin B12 na folate. Karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụghị pasteurized nke ọma, mmiri ara ehi ewu nwere ike ịnwe ọtụtụ ụdị nje na-ebute ọrịa maka ụmụ ọhụrụ.
Hụ ọzọ: [Review] Mmiri ara ehi Pediasure ọ dị mma? Kedu ụdị agụnyere?
Ngwaahịa na-ere 50%
Mmiri ara ewu 6 kacha mma maka ụmụ amụrụ ọhụrụ taa
Mmiri ara ehi ewu dị ezigbo mma ma dị mma maka ụmụaka na-eto eto na oge mmepe na okenye. Ya mere, ndị nne na-achọ mgbe niile ịchọta ụdị mmiri ara ehi iji nyere ụmụ ha aka ịzụlite ogologo na ịdị arọ kachasị. Ụdị mmiri ara ehi a na-ahụkarị nke edepụtara n’okpuru ga-enyere ndị nne aka ịtu aka ma họrọ ngwaahịa kachasị mma na nke kachasị mma maka ụmụ ọhụrụ ha.
3.1 Mmiri ara ehi ewu nke Korea
Ngwaahịa mbụ n’ime mmiri ara ehi ewu 6 kacha mma maka ụmụ amụrụ ọhụrụ taa bụ mmiri ara ewu Hikid Korea. A na-emepụta ụdị mmiri ara ehi a site na mmiri ara ehi dị nchebe nke ewu ndị a zụlitere na gburugburu ebe obibi nke ugwu ugwu Korea. E wezụga nke ahụ, a na-emepụta mmiri ara ehi maka ụmụaka site na 1 ruo 9 afọ. N’ihi na nke a bụ oge dị mkpa maka uto siri ike nke ịdị elu nwa na ibu.
N’ihe gbasara ihe oriri, mmiri ara ehi ewu Hikid nwere ihe oriri na-edozi ahụ bara ụba na Iron, Calcium, Vitamin D, Zinc yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N’ihi ya, ngwaahịa a ga-enyere nwa gị aka ito eto ogologo, ahụike na amamihe. Karịsịa, ọdịnaya nke nri dị na mmiri ara ewu Hikid dị elu ọtụtụ ugboro karịa mmiri ara ehi. Acid abụba (> 35% mmiri ara ehi), Calcium (> 33% nke mmiri ara ehi), Iron (>5% nke mmiri ara ehi), vitamin A (> 10% nke mmiri ara ehi) …
Ọzọkwa, n’ọtụtụ ihe ndị na-achọpụta ihe, mmiri ara ehi na-enyere aka ịkwado usoro nri nri ma na-abawanye absorption. N’otu oge ahụ, na-akpali metabolism, na-enyere nwa aka ibu ibu, tolite elu na nwere pụtara ìhè ụbụrụ. Na mgbakwunye, ọ na-emekwa ka nnabata nke micronutrients, mmepe na mmezi nke ọrụ mgbochi eriri afọ nke nwa.
Ọnụ ahịa ngwaahịa: 685,000 VND/700g.
Ntụaka: Top 5 kacha ewu ewu na-anakọta mmiri ara ehi na 2021
3.2 Mmiri ara ehi ewu ewu 0+ (ụmụaka 0-12 ọnwa)
Nke a bụkwa ụdị mmiri ara ehi nke dị n’elu 6 mmiri ara ehi ewu kacha mma maka ụmụ amụrụ ọhụrụ taa nke ndị nne Vietnamese na-ahọrọ. Na mgbakwunye, mgbakwunye eriri eke sitere n’okike Synergy 1 na-enyere aka mee ka stool dị nro, na-eme ka mgbari nri na-echebekwa eriri afọ nke ọma.
Na mgbakwunye, mmiri ara ehi nwekwara DHA, choline, taurine iji nyere aka ịzụlite ụbụrụ na ọhụụ. Site n’ebe ahụ, inyere ụmụaka aka ịbawanye ọgụgụ isi ha, kwalite ikike mmụta ha na ịnụ ụtọ ịgagharị gburugburu ụwa. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ngwaahịa ahụ nwekwara Palatinose iji nyere aka inye ike na-adịgide adịgide na ụbụrụ ụbụrụ na sistem ụjọ.
Otu ihe dị mkpa bụ na Goatlac 0+ mmiri ara ehi nwekwara calcium, phosphate, na vitamin D. Ihe ndị a dị mkpa maka ọkpụkpụ ọkpụkpụ iji nyere aka ịzụlite elu dị ịrịba ama. Na Lysine na-enyere ụmụaka aka iri ihe na-atọ ụtọ, na-etinye uche nke ọma. N’otu oge ahụ, na-emeziwanye anorexia, na-akpali mgbaze iji nyere ụmụaka aka iri nri nke ọma.
Ọnụ ahịa ngwaahịa: 600,000 VND/800g.
3.3 Kabrita Goat Milk No. 1 maka ụmụ ọhụrụ sitere na ọnwa 0-6
N’ezie, No. 1 Kabrita ewu mmiri ara ehi si Hyproca Nutrition pụtara maka nnukwu protein na abụba ruru. Na mgbakwunye, abụba bara ụba na ARA, Pre-DHA, Omega 6 … na-enyere ụmụ ọhụrụ aka ịgbari ngwa ngwa ma banye. E wezụga nke ahụ, protein dị na mmiri ara ewu nwere protein casein ugboro anọ karịa protein whey.
Ọzọkwa, ekele maka nchikota nke GOS, FOS, nje bacteria Bifidobacterium BB12 dị ndụ, ngwaahịa ahụ na-enyere aka ịbawanye nzaghachi anụ ahụ nke anụ ahụ ma mee ka nkwụsị nke nwa ahụ sie ike. Karịsịa, ụdị mmiri ara ewu a maka ụmụ ọhụrụ nwekwara ọtụtụ nucleotides eke dị ka mmiri ara ara. Ya mere, nyere ụmụaka aka ịbawanye nguzogide, zere afọ ọsịsa, diphtheria na meningitis.
Otu isi ihe ndị nne nwere mmasị na ya bụ DHA, choline, na taurine nke dị na mmiri ara ehi iji nyere aka ịzụlite ụbụrụ na ịhụ ụzọ. N’ihi ya, nyere ụmụaka aka ịbawanye ọgụgụ isi.
Ọnụ ahịa ngwaahịa: 480,000 VND / igbe nke 400g.
Lee ihe ọzọ: karama mmiri ara ehi 5 kacha mma maka ụmụ ọhụrụ, ndị nne kwesịrị ịma
3.4 Goatmil Ewu Mmiri ara ehi BA – Ewu mmiri ara ehi
Ndị nne nwere ụmụaka na-eri nri na-edozi ahụ, mmiri ara ewu Goatamil BA bụ nnukwu ntụnye. Ngwaahịa a bụ nke ika DairyGoat – Vietnam Dairy Products Joint Stock Company nwere ihe eji ebubata na Netherlands. Na mgbakwunye, mmiri ara ehi Goatamil BA nwere nnukwu protein na ọdịnaya lipid. Site n’ebe ahụ, nye ike zuru oke maka anorexia na ndị na-eri ume ume na naanị 1 ml nke mmiri ara ehi.
Na mgbakwunye, mmiri ara ehi Goatamil BA nwere ihe ndị na-etinye protein n’ime ngwa ngwa. Karịsịa, oke nkewa dị n’etiti protein mmiri ara ehi ewu na protein soy na-enyere aka ịhazi na iweghachi nri ụmụaka. Ọbụghị naanị nke ahụ, mmiri ara ewu a nwekwara ọgaranya na amino acid Lysine, ihe dị mkpa maka ogbo ntolite ụmụaka. Ya mere, ngwaahịa a na-enyere ụmụaka aka iri nri nke ọma, gbarie nke ọma, na-eto ngwa ngwa ma na-eme nke ọma.
Uru pụtara ìhè nke mmiri ara ewu a bụ Synergy1 dual fiber system (FOS/Inulin) iji nyere aka gbochie afọ ntachi na ịzụlite nje bacteria bara uru maka eriri afọ. N’otu oge ahụ, welie motility eriri afọ, nyere ụmụaka aka ịbanye nke ọma. Otu ihe ị ga-amata bụ na mmiri ara Goatamil BA nwere ọtụtụ ihe na-edozi ahụ iji nyere aka ịzụlite ụbụrụ na uche nwa. N’otu oge ahụ, na-enyere ụmụaka aka inwekwu ọgụgụ isi, na-achọsi ike ịmụta ihe, na-achọsi ike ịmụta banyere ụwa gbara ha gburugburu.
Ọnụ ahịa ngwaahịa: 300,000 VND/400g.
3.5 Ildong No. 1 mmiri ara ewu na Korea – mmiri ara ewu maka ụmụ ọhụrụ
Ọ bụrụ na nne ọ bụla ka na-eche banyere mmiri ara ewu kacha mma maka nwa ọhụrụ ha taa, ha enweghị ike ileghara mmiri ara ewu Ildong nke Korea nke 1 anya. A na-emepụta ngwaahịa ndị dị na ngalaba dị elu site na 100% ihe dị ọcha nke dị oke nchebe maka ahụike ụmụaka.
N’ihe gbasara ihe oriri, mmiri ara ewu Ildong nke Korea nke 1 bụ ahịrị mmiri ara ehi dị jụụ nwere protein na abụba dị jụụ nke dị mfe ịnweta. Ya mere, ọ na-enyere aka melite usoro nri nri nke ọma. Karịsịa, mmiri ara ehi ewu Ildong na-enwekarị ihe na-arụ ọrụ dị ka mmiri ara ara, yabụ na ọ dabara maka ụmụ ọhụrụ na-adịghị eto ngwa ngwa, ndị na-eri nri na-achọkarị ihe na-ahụ maka protein mmiri ara ehi.
Uru nke mmiri ara ehi ewu a maka ụmụ ọhụrụ abụghị naanị dị jụụ ma dị ọcha, kamakwa ọ nwere nnukwu ihe oriri na-edozi ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, njikarịcha nke usoro mmepụta kachasị dị mkpirikpi ga-ekwe omume ekele maka ịkwalite njikwa njikwa site na usoro njikwa mma RMP. N’ihi ya, ngwaahịa ahụ kacha mma maka ahụike nwa.
Ọnụ ahịa ngwaahịa: 1,450.00 VND/800g.
3.6 Mmiri ara ewu maka ụmụ ọhụrụ DG 1
N’ikpeazụ n’elu 6 kacha mma mmiri ara ewu maka ụmụ amụrụ ọhụrụ taa bụ DG 1. Nke a bụ ahịrị mmiri ara ehi dị ọcha sitere na New Zealand nke nwere ísì okike na nke pụrụ iche nke usoro mechiri emechi sitere na mmiri ara ehi ọhụrụ.
N’ihe gbasara ihe oriri, mmiri ara ehi nwere ọtụtụ ihe na-arụ ọrụ sitere n’okike. Dị ka ọgwụ mgbochi ọrịa, ihe ndị na-eto eto, nucleotides, oligosaccharides … Ya mere, ọ na-enyere aka ịbawanye usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ maka uto dị mma nke nwa. Ọ bụghị naanị nke ahụ, abụba dị na mmiri ara ehi na-agbari ngwa ngwa ma tinye ya n’ime ya, ọgaranya AA, pre-DHA, na omega 6. N’otu oge ahụ, usoro ihe oriri na-edozi ahụ dị ọcha nke ụbụrụ ụbụrụ dị ka taurine, choline, vitamin B, Se; Fe… Ihe ndị a niile ga-enyere ụmụaka aka ịma ihe.
Enwere ike ịhụ na usoro mmiri ara ewu DG 1 bụ ihe mgbakwunye nri maka nri kwa ụbọchị. N’otu oge ahụ, dochie nri nri na-edozi ahụ maka ụmụaka ka ha wee nwee ahụ ike. Ọzọkwa, ọdịnaya nke mono na polyunsaturated fatty acids na ọkara yinye triglycerides nwere nnukwu uru maka ahụike mmadụ.
Ọnụ ahịa ngwaahịa: 473,000 VND/400g.
A chịkọtara akụkọ dị n’elu Mmiri ara ewu 6 kacha mma maka ụmụ ọhụrụ taa. Dabere na mkpa ojiji na ikike akụ na ụba nke ezinụlọ ọ bụla, ndị nne na nna na-ahọrọ ngwaahịa kachasị mma maka nwa ha iji. Olileanya, ozi dị n’elu ga-enyere gị aka ịhọrọ ngwaahịa mmiri ara ehi kwesịrị ekwesị maka ụmụntakịrị gị.
Xem Thêm Top 5 hộp chia sữa cho bé tiện lợi được các mẹ lựa chọn | Vbid.vn
20+ lời chúc 8/3 cho mẹ ấm áp và ý nghĩa nhất nên tham khảo | Vbid.vn
8/3 cần thiết cho mẹ đúng hơn là tình cảm và cảm xúc của tôi dành cho người mẹ thân yêu của mình. Ngoài hoa, quà và những món quà khác thì lời chúc 8/3 dành cho mẹ là điều may mắn và tôn trọng nhất […]
[Review] Top 10 Loại bánh kẹo Hàn Quốc ngon nhất (An Toàn) | Vbid.vn
Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu, 10 nhà hàng tốt nhất tại Hàn Quốc hiện nay Viết hay, chúng ta cùng nhau đọc và tổng hợp ý kiến ​​của nhiều doanh nhân. Mục lục1 Cách chọn món ăn Hàn Quốc1.1 Chọn thực phẩm theo chế độ ăn uống và mục đích1.2 Xác định các […]
Galaxy Z Fold2 5G Đặc Biệt ,giá rẻ, chính hãng | Vbid.vn